Tahiry sy lovantsofina : afaka manambara tantara ireo sary fahiny | NewsMada
Tahiry sy lovantsofina : afaka manambara tantara ireo sary fahiny
Na tsy mbola omen’ny Ma­la­gasy lanja loatra aza, iray amin’ ireo mpirakitra tantara tsy miangatra ny sary. Anisan’izany ny saripika, izay efa namakivaky an­jato taona teto Madagasikara. Ankehitriny vao manomboka mahatsapa io anjara andraikitry goavana tazonin’ny sary io ny ankamaroan’ny Malagasy. Mi­ainga any amin’ny ankohonana, mipaka hatrany amin’ny firenena sy ny tantara maneran-tany, voarakitra anaty sary.
Milaza sy mahalaza zavatra maro izy ireny. Ahafantarana sy hahafahana mametra na mihazona ny fototra ijoroana ihany koa. Hoenti-mamolavola ny ho avy any aoriana. Ahafantarana ny fo­­mba amam-panao, ny kolontsaina, ny fomba fiaina, ny rafitra mifehy ny fiaraha-monina, sns.
Fantatra fa na eo aza ilay fitodihana tsikelikely any amin’ny sary fahiny, mbola vitsy iha­ny ny Malagasy manao fikarohana miainga avy amin’ny alalan’ireny sary ireny. “Saika porofo madinika ihany no ilain’ny Malagasy ny sary fahiny fa matetika, ny soratra no ifotorany bebe kokoa”, hoy Ranarijesy Elodie, mpianatra tantara. No­ma­rihiny anefa fa “na ny tranga faran’izay madinika indrindra eo amin’ny fiarahamonina aza, tazana anaty sary avokoa”.
Tsetsatsetsa tsy aritra no nilazany fa “faran’izay manana ny lanja sy toerana sahaza azy ny sary… Manamarina izany ny fisian’ny fakantsary etsy sy eroa any amin’ireny toerana misy zava-tsarobidy arovana ireny”!